Kitra – « Orange Pro League »: hiady ny ho lohany ny AS Adema sy ny Ajesaia | NewsMada
Hitohy ny faran’ny herinandro izao ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara (Orange Pro League-OPL), taranja baolina kitra, tsy azo atrehin’ny mpijery. Anisan’ny lalao andrasan’ny maro ny fifanandrinana eo amin’ny AS Adema sy ny Ajesaia.
Lalaon’ny efa samy tafita hiatrika ny antsoina hoe “Playoffs”, ny roa tonta nefa na izany aza, tsy maintsy hanampy ny azony, isa 22 ny ekipan’ny seranam-piaramanidina raha 23 kosa ny an’ny avy etsy Antaninkatsaka. Ela­nelana isa iray no manasaraka ny an-daniny sy an-kilany. Ho fantatra eny By Pass ny ho laharana voalohany amin’izy ireo ho an’ny kaonferasa Avaratra.
Hiady tsy hidinana diviziona faharoa
Ankoatra izany, tsy maintsy miady mafy koa ny FC Zanakala, manana isa 13 sy ny CS-DFC, isa 10, any amin’ny laharana faharoa avy any amin’ny farany ho an’ny kaonferansa Atsimo. Tsy maintsy hiady mafy ny ekipa roa tonta raha tsy te ho raraka amin’ity fifaninanana ity ka hidinana any amin’ny diviziona faharoa. Hatao eny By Pass hatrany koa ny fifanandrinan’izy ireo.
Etsy an-daniny, handranto lalao any Ampasambazaha ka hifanandrina amin’ny 3FB avy any Toliara ny Uscafoot, ny alahady ho avy izao. Efa any an-toerana, herinandro mialoha, ny ekipan’ny kaominina Antananarivo Renivo­hitra amin’izao fotoana izao.